စစ်ကောင်စီ၏ ရုံးပိတ်ရက် ထပ်မံသတ်မှတ်သော်လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ စက်ရုံအချို့ ဖွင့်လှစ်ရန်ရှိနေ - Myanmar Pressphoto Agency
စစ်ကောင်စီ၏ ရုံးပိတ်ရက် ထပ်မံသတ်မှတ်သော်လည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ စက်ရုံအချို့ ဖွင့်လှစ်ရန်ရှိနေ
Business Covid_19 industry Labour MPA Myanmar News
Business July 24, 2021 ·0Comment
စစ်ကောင်စီမှ ရုံးပိတ်ရက် ဇူလိုင် ၂၆ မှ သြဂုတ် ၁ ရက်နေ့အထိ ရုံးပိတ်ရက် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ရန်ကုန်ရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအချို့ ပြန်လည်ဖွင့်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဟု စက်ရုံအချို့ထံမှ သိရသည်။
စစ်ကောင်စီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရုံးပိတ်ရက်အား သြဂုတ် ၁ ရက်နေ့ထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းများ မပါဝင်ဘဲ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအနေဖြင့် ဖွင့်လှစ်ရန်ဟု ရေးသားထားသည်။
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား မကျဆင်းစေရေး စက်ရုံ၊ အ လုပ်ရုံများ COVID စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့် အညီ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်ဟု ထုတ်ပြန်ရေးသား ထား၍ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုသည့် စက်ရုံများအ နေဖြင့် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ခုမနက်ပဲ အစည်းအဝေးလုပ်တယ်။ စက်ရုံတွေပြန်ဖွင့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ စက်မှုဇုန်ထဲမှာ ရှိတဲ့ စက်ရုံတွေ အကုန်နီးပါးပဲ။ အခုရုံး ပိတ်ရက် ကိုး ရက်မပိတ်ခင် ထဲက ဝန်ထမ်းအင်အားရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ဖျားနာနေလို့ အလုပ် ပျက်ကွက်နေရတယ်။ ခုရက်ပိုင်း အခြေအနေက ပိုဆိုးလာတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ ဆင်း၊ မဆင်းတော့မသိဘူး။ အကုန်လုံးကို လိုက်ပြီး အကြောင်းကြားထားတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ ရွာသာကြီး စက်မှုဇုန်ရှိ ကျောက်စိမ်းဖိနပ်စက်ရုံမှ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာန HR မန်နေဂျာ ကိုဇော်ဇော်အောင်က MPA သို့ ပြောသည်။
စက်မှုဇုန်များ၏ ဝန်ထမ်းအင်အားများသည် သောင်းနှင့်ချီရှိနေပြီး လက်ရှိအခြေအနေအရ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်မည်ဆိုပါက အခြေအနေပိုမို ဆိုးရွားလာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ညီမတို့စက်ရုံတွေလည်း ကြားတော့ကြားနေတယ်။ ခုထိတော့ အလုပ်ဆင်းရမယ်လို့ ဆက်သွယ်လာတာတော့ မရှိသေးဘူး။ ညီမတို့စက်ရုံဆို အလုပ်သမား ၈၀၀၀ နီးပါးရှိတယ်။ တချို့လည်းဖျား၊ အနံ့ပျောက်တဲ့ သူကလည်းပျောက်ပေါ့နော်။ ရောဂါကြောက်ရတယ် ဆိုပေမယ့် အလုပ်မရှိမှာလည်း ကြောက်ရတယ်။ တိုင်ပင်နေကြတာပေါ့။ ပြန်ဖွင့်လိုရှိရင် ဆင်းသင့်၊ မဆင်းသင့်ကို” ဟု လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် စက်ရုံဝန်ထမ်း အလုပ်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
စက်ရုံများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိအချိန်ထိ ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ပြီး တိကျတဲ့အဖြေတစ်ခု မရရှိသေးကြောင်း အရှေ့ဒဂုံ စက် မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ရုံးအဖွဲ့၏ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးလှထွန်းကျော်က ပြောသည်။
“ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ COVID စည်းကမ်းနဲ့အညီ ဖွင့်ချင် ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ထိတော့ ဘာမှ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း အကြောင်းကြားထားတာတော့ မရှိသေးဘူး။ တနင်္လာနေ့လောက်ကျမှ အတိအကျ ပြောနိုင်မယ်“ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် COVID တတိယလှိုင်း ပြင်းထန် စွာဖြစ်ပွားနေပြီး ကူးစက်မှုနှင့် သေဆုံးမှု ဆိုးရွားစွာမြင့်တက်နေကာ ရပ်ကွက်တိုင်း၊ လမ်းတိုင်း လိုလိုတွင် အတည်ပြုလူနာနှင့်သေဆုံးသူ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
#ရန်ကုန်မြို့ #စက်မှုဇုန် #ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် #COVID19 #MPA
Some Factories Plan to Reopen Despite SAC’s Extended Holiday
24 July 2021 By MPA
Despite the SAC’s holiday extension from July 26 to August 1, it has been learnt that some factories and businesses will reopen, according to some factories.
According to SAC’s announcement, the holiday has been extended to August 1 and businesses with the exception of banks and financial ones can be reopened.
The announcement allows businesses to run in line with COVID-19 rules and regulations to keep up productivity and those who wish to resume may do so on July 26.
“We just hadameeting this morning. Factories will reopen, almost all the factories in our zone. Since before this 9-day long holiday, more than 20% of the workforce were sick and work had been off. Things have gone even worse these recent days. I’m not sure whether employees would go to work or not but all have been informed,” said Ko Zaw Zaw Aung,aHR manager at diamond shoe factory in Ywar Thar Gyi factory zone, Yangon, to MPA.
The factory zones have tens of thousands of employees, it could worsen the conditions if reopened.
“I heard about our factory too. But we have not been told to go to work. There are about 8000 employees in our factory. Some get sick and some lose smell. Even though we’re afraid of the disease, we’re also afraid of losing our jobs. We’re considering if we should go or not if it reopens,” saidaHlaing Thar Yar factory employee.
It is still being discussed whether to reopen the factories and no solid answer has been reached thus far, said U Hla Tun Kyaw, an East Dagon Industrial Zone management head official.
“According to the announcement, we can rerun in line with COVID-19 regulations and nothing has been decided yet till now. We haven’t informed the employees. I think we will make it clear next Monday,” he said.
In Yangon, COVID third wave is severely raging with increasing deaths and there are confirmed patients now in almost every neighborhood.
#Yangon #Industries #Reopened #COVID_19 #MPA